यी ५ कारण महिला र पुरुष अलग बस्न सक्दैनन् ! «
यी ५ कारण महिला र पुरुष अलग बस्न सक्दैनन् !
प्रकाशित मिति : 15 February, 2019
१ सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारण हो । जस कारण महिला र पुरुषलाई एक अर्काको आवश्यकता पर्छ । परन्तु दुवै जनाको लागि सुरक्षाको कारण अलग अलग हुनसक्छ ।
२. शारीरिक सन्तुष्टि तथा परिवारलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि महिला र पुरुष दुवैलाई एकअर्का प्रति निर्भर हुनुपर्छ । यो पनि एक महत्वपूर्ण कारण हो महिला–पुरुष एकअर्काप्रति टाढा रहन नसक्ने ।
३. भावनात्मक सहयोग तथा मनोबलको लागि पनि दुवैले एकअर्काको आवश्यक ठान्छन् । सबैलाई एक यस्तो जीवन साथिको आवश्यक पर्छ जसले आफ्नो मनको कुरा बुझिदियोस् । मनको कुरा बुझ्ने जीवन साथीको आवश्यकता महत्वपूर्ण हुन्छ ।
४. चाहे महिला होस् या पुरुष, दुवैलाई सल्लाह गर्ने मानिसको आवश्यक पर्छ । यसका लागि अनिवार्य एक जीवन साथी आवश्यक पर्छ । यस कारण महिला र पुरुषले एकअर्काको आवश्यक ठान्छन् ।
५. महिलामा केही यस्ता गुण हुन्छ जो पुरुषमा हुँदैन तथा पुरुषमा जुन खुबी हुन्छ त्यो महिलामा हुँदैन । यसर्थ दुवै एकअर्कासँग जीवन बिताउन चाहन्छन् र आवश्यक ठान्छन् । यी फरक फरक गुण र खुबी भएकाहरुको मिलनबाटै जीवन विताउँछन् र पूर्ण बनाउँछन् ।@मिडिया एनपी, काठमाडौं । जुन सुकै वर्ग वा समुदायका पुरुषलाई आफ्नो जीवनमा एक महिलाको आवश्यक पर्छ । यसरी नै महिलालाई पनि एक पुरुष जीवन साथीको रुपमा आवश्यक हुन्छ । भलै यी दुवै जतिसुकै आत्मनिर्भर किन नहुन तर कुनै न कुनै मोड यानी कि अवस्थामा एकअर्काको आवश्यकता पर्छ नै । एक अर्काको अभावमा जीवन चलाउन मुश्किल पर्ने गर्छ । आखिरी किन एक महिलालाई एक पुरुष वा एक पुरुषलाई एक महिला किन आवश्यक पर्छ त ? यसमा यही कारण रहेको केही विभिन्न अध्ययनले देखाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
सोही अनुसार निम्न पाँच कारण :
५. महिलामा केही यस्ता गुण हुन्छ जो पुरुषमा हुँदैन तथा पुरुषमा जुन खुबी हुन्छ त्यो महिलामा हुँदैन । यसर्थ दुवै एकअर्कासँग जीवन बिताउन चाहन्छन् र आवश्यक ठान्छन् । यी फरक फरक गुण र खुबी भएकाहरुको मिलनबाटै जीवन विताउँछन् र पूर्ण बनाउँछन् ।
बन्दाबन्दीको समयमा मानसिक तनावका कारण आ’त्मह’त्या बढ्यो
विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को बढ्दो सङ्क्रमणका कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको
क्वारेन्टिनमा त’नाव हुन नदिन मनोपरामर्श
कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–९ ले क्वारेन्टिनमा रहेकालाई मानसिक त’नाव हुन नदिन
विश्वभर चार करोड बालबालिकाले धुम्रपान गर्छन्: डब्लुएचओ
विश्वभर १३ वर्षदेखि १५ वर्ष उमेर समूहका चार करोड बढी
चिउराकै भरमा नौ दिन पैदल यात्रा…तर अझै घर पुगेका छैनन्
“रसुवा जिल्लाबाट हिँडेको आज नौ दिन भयो तर पनि घर